နည်းပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်) သည် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန (သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ) လက်အောက်ရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သန်လျင်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံတက္ကသိုလ်ကွန်ယက် ၏ တွဲဖက်အသင်း၀င်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံထားရသောမြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒုတိယအစောဆုံးတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပြီး AUN-QA (အာဆီယံတက္ကသိုလ်ကွန်ယက်အရည်အသွေးအာမခံချက်) အသိအမှတ်ပြုခံရသည့် ပထမဆုံးသောနည်းပညာဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းသည် ATU-Net (အာရှနည်းပညာတက္ကသိုလ်ကွန်ယက်) ၏အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်သည်။
Technological University, Thanlyin (TTU)
ဝန်ထမ်းပေါင်း ၅၄ (၂၀၀၉) ယောက်
တည်နေရာ သန်လျင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အကျယ်အဝန်း ၃၁၀.၀၅ ဧက
အဖွဲ့အစည်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန (သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ)၊ အာရှနည်းပညာတက္ကသိုလ်ကွန်ယက် ,အာဆီယံတက္ကသိုလ်ကွန်ယက်
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်) ၏အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်အများစုကို အင်ဂျင်နီယာပညာရေးအသိအမှတ်ပြုကော်မတီ မှအပြည့်အဝအသိအမှတ်ပြုခြင်း (သို့မဟုတ်) ယာယီအသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းသည် ISO 9001: 2008 နှင့် ISO 9001: 2015 လက်မှတ်များ ရရှိထားသောနည်းပညာတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၁၉၉၃ မတ်လတွင် စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (၁) အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၅ နိုဝင်ဘာလတွင် အစိုးရနည်းပညာဆိုင်ရာအင်စတီကျု (GTI) ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ၁၉၉၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ကျောင်းကို အစိုးရနည်းပညာတက္ကသိုလ်ကောလိပ် (GTC) သို့အဆင့်မြှင့်ခဲ့ကာ သုံးနှစ်တာကာလဘွဲ့ (B.Tech) အစီအစဉ်များကို သင်ကြားခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်အဖြစ် တိုးမြှင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
၎င်းသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတက္ကသိုလ်အဆင့်သို့ရာထူးတိုးမြှင့်ခံထားရသောယခင်နှစ်နှစ်ကျောင်းများ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များတွင်ကျောင်းများနှင့်တက္ကသိုလ်များကိုအကြိမ်ကြိမ်ပိတ်ပစ်ခဲ့သော [ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကောင်စီ | စစ်တပ်အစိုးရ] သည်ကျောင်းသားများအားအဓိကမြို့လယ်နေရာများမှခွဲထွက်ရန်မူဝါဒကိုကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်ကျောင်းသား ၄၆၁ ဦး သည်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ (BE) သို့မဟုတ်ဗိသုကာပညာဘွဲ့ (B.Arch) ဘွဲ့များရရှိခဲ့သည်။
တက္ကသိုလ်မှ လေးနှစ်တာ သင်ကြားရသော နည်းပညာဘွဲ့ (BTech)၊ နှစ်နှစ်သင်ကြားရသော BE, BArch နှင့် ME အစီအစဉ်များကို သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ နှစ်စဉ်တက္ကသိုလ် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲမှ ရမှတ်များအရ ကျောင်းသားများကိုတက္ကသိုလ်တွင် လက်ခံသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစ၍ တက္ကသိုလ်သည် (၆) နှစ်တာ သင်ကြားရသော အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ နှင့် Arch of Bachelor ဘွဲ့များကို သင်ကြားပေးသည်။ ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်ပြည့်မီသော ကျောင်းသားများသည်မြန်မာနိုင်ငံရှိမည်သည့်ဒေသမှမဆို နည်းပညာတက္ကသိုလ် (သန်လျင်) သို့လျှောက်ထားနိုင်သည်။
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ B.E. M.E.
ဓာတုအင်ဂျင်နီယာ B.E. M.E.
လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ B.E. M.E.
အီလက်ထရွန်းနစ် အင်ဂျင်နီယာ B.E. M.E.
သတင်းအချက်အလက် အင်ဂျင်နီယာ B.E. M.E.
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ B.E. M.E.
မက္ကာထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ B.E. M.E.
ရေနံ အင်ဂျင်နီယာ B.E. M.E.
TU, Thanlyin။ Ministry of Science and Technology, Myanmar။ 2009-09-04 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Departments and Faculty။ Ministry of Science and Technology, Myanmar။ 2009-09-05 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
ATU-Net, member institution။ Asia Technological University Network။
ASEAN University Network, associate member institution။ ASEAN University Network Quality Assurance။